Gazety maneran-tany - laharana 3 - ny volana martsa
Home » About us » Newsletters » Gazety maneran-tany - laharana 3
Ny lahatsoratra tafiditra ao amin'ny tranokalan'ny World March II dia aseho, manomboka amin'ny 23 ny volana aogositra an'ny 2019 ka 15 tamin'ny volana septambra ny 2019
Ao amin'ity bulletin ity, asehontsika ato ny tranonkala ny 2 World March, eo anelanelan'ny 23 ny volana aogositra 2019 hatramin'ny 15 tamin'ny volana septambra 2019.
Ny fitaovan'ny World March dia novoizina sy tsikelikely ny fomba fiasan'ny fironana ary ny hetsika fanomanana sy ny fanaparitahana dia mihazakazaka haingana.
Any Amerika Atsimo
Vaovao fohy manomboka amin'ny faran'ny volana Aogositra ny 2019 ka hatramin'ny 15 tamin'ny volana septambra 2019
Nisy hetsika goavana natao tao amin'ny andrim-panjakana tany Slovenia, toy ny fanolorana ny martsa maneran-tany any Piran, navoakan'ny Ben'ny tanànan'i Piran miaraka amin'ny Museum of the Sea "Sergej Mašera", Komitin'ny Fandriampahalemana sy Coexistence "Danilo Dolci ”Ary ny fikambanana Mondosenzaguerre sy izay nandraisan'ny Ben'ny tanàna ny Koper Ankaran sy Aiello (maneho ny fandrindrana ny fahefana eo an-toerana ho an'ny fiadanan'i Friuli Venezia Giulia) ary ny filohan'ny Union italiana Slovenia sy Kroasia.
Ny Kaominin'i Piran dia manohana ny 2 World March ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fandriam-pahalemana any Slovenia ary mifikitra amin'ny hevitra momba ny Fiadanan'ny fandriampahalemana iraisampirenena ary maimaimpoana fitaovam-piadiana niokleary.
Tany Vicenza, Italia, ny volana martsa dia naseho tamin'ny Aogositra 30, tao anatin'ny rafitry ny hetsika "Fornaci Rosse" fanao isan-taona, miaraka amin'ny adihevitra manodidina ny resaka nataon'i Francesco Vignarca, mpandrindra ny tambajotran-tsoratr'i Italiana sy Simon Goldstein, ao amin'ny Ivontoerana fikarohana momba ny fiteny sy fitondran-tena ho an'ny trauma amin'ny ady sy ny fiadiana.
Tamin'ny volana septambra 5, tany Italia koa, Hiroshima Camellia dia natolotra ny Ben'ny tanànan'i Muggia, ny Kaomina voalohany dia niditra tamin'ny 2 World March, hetsika izay nisy ny munisipalin'ny San Dorligo della Valle / Dolina. Nanatevin-daharana ny 2 World martsa izy.
Mitohy any Italia, ao amin'ny Colosseum any Roma, 'ny fampirantiana lehibe indrindra manerantany ho fankalazana ny "Andro fiadanam-be iraisam-pirenena amin'ny Firenena Mikambana" ary hisy ao, Peace Run manolotra ny loka nomena ny World March.
Nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety, Rafael De La Rubia dia handray ny fanilo ho an'ny fandriam-pahalemana amin'ny hazakazaka fandriampahalemana izay hitarika mankany amin'ny World Summit of Nobel Peace Prix izay hotontosaina manomboka amin'ny 19 ka 22 amin'ny volana septambra any Mérida, Mexico: Hankinina aminao ianao, amin'ny torolelin'ny tandindon'ny fiadanam-be.
Avy any Madrid, Espaina, tao anatin'ireo hetsika nanasongadina ny tontolon'ny 2 World martsa dia nanolotra hetsika iray natolotry ny World walang Wars sy herisetra Association manerana an'i Espana isika, izay ahitana ny fanasana ny sekoly rehetra any Espaina ho Ataovy ireo tandindon'ny olombelona amin'ny fandriampahalemana sy ny tsy fandeferana.
Taorian'ny Espana dia nisy ny “Resadresaka nifanaovana tamin'i Jaime Rojas Hernández” mpikambana ao amin'ny Canarian Association for Health Development izay navoaka tamin'ny alàlan'ny Hainoana izay nanatevin-daharana ny 2 World March ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fandriampahalemana.
Ny fahazavan'ny tsikera momba ireo antony tena ilaina amin'ny fikarakarana an'izao tontolo izao ho an'ny fandriampahalemana sy tsy fandeferana nataon'i Fernando García, mpanoratra ilay boky hoe "Humanism in India. "
Tany Amerika Atsimo, ny hetsika Murales por la Paz any Kolombia dia nisongadina. Traikefa nahafaly izay nampivondrona mpampianatra, mpianatra, fikambanana sosialy ary mpanohana izay nandray anjara tamin'ireny hetsika ara-kanto ireny. Ary ireo fanehoana fankatoavana sy firaisankina hafa, toy ny "hetsika amin'ny Kilasy".
Nasongadinay koa ny fanangonana ireo hetsika izay tanterahana sy omanina ao Brezila, toa an'i Londrina, kaominina izay azo lazaina fa "manabe ny fandriampahalemana." Nasongadinay ny hetsika iray efa nifarana, ny fanokanana ny Totem fandriam-pahalemana Totem sy ny angon-drakitra momba ny fandriampahalemana.
Tao anatin'ny hetsika ho fampiroboroboana ny kolontsaina fandriampahalemana, nanaovana ny fanentanana ny Sekoly 200 ho an'ny Fandriampahalemana sy ny tsy fanarahan-dalàna, tao Recife-Pernambuco, Brezila.
Ary, tsy afaka fandraisana andraikitra mivantana ny demokrasia, "Lazao, manome lanja izay inoanao izahay", satria ny Martsa maneran-tany koa dia te hametraka ny voam-bary ao amin'ny fampiroboroboana ny demokrasia mivantana.
Ao amin'ny 2 World March dia hanao dinika tena fotoana izahay:
Azontsika atao ao amin'ny forum iray, amin'ny fananganana sarimihetsika, amin'ny fihetsiketsehana, mandritra ny ora 2 na roa andro. Tena ilaina ny mifanerasera bebe kokoa amin'ireo mpandray anjara.
Ity dia santionany kely amin'ireo hetsika manodidina ny 2 World martsa ho an'ny fandriampahalemana sy tsy fandriampahalemana androany.
Ny World Martsa dia miorim-paka ao Slovenia
Natolotra tao Piran ny World Martsa
Hevitra, manome lanja ny hevitrao izahay
Natolotra tao Vicenza ny World Martsa
Herisetra cinefórum any Caracas
Fivoriana eran-tany miaraka amin'ny Papa
Rehefa miditra voalohany amin'ny fampiasana ny bokotra Social Login ianao, dia manangona ny fampahalalana momba anao ao amin'ny tranokalan'ny kaonty navoakan'ny mpizara Social Login, mifototra amin'ny safidinao manokana. Manana adiresy mailaka ihany koa izahay mba hamorona kaonty ho anao amin'ny tranokalanay. Raha vao noforonina ny kaontinao dia ho tafiditra amin'io kaonty io ianao.
Gazety maneran-tany - laharana 10